Crystal Palace oo Ka Badisay Kooxda West Ham United “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Crystal Palace oo Ka Badisay Kooxda West Ham United “SAWIRRO”
Kooxda West Ham United ayaa waxaa garoonka Boleyn Ground 3-1 uga badiyay kooxda Crystal Palace.
Ciyaaryahan Glenn Murray ayaa labadii qeyb ee ciyaarta labo gool u kala dhaliyay kooxda Crystal Palace,halka goolka sedaxaad uu u dhaliyay ciyaaryahan Scott Dann.
Garsoorihii ciyaarta Mike Dean ayaa daqiiqadii 76-aad ee ciyaarta kaarka casaanka ah u taagay ciyaaryahan Glenn Murray oo labo gool u dhaliyay kooxda Crystal Palace.
Ciyaaryahan Enner Valencia ayaa goolka kaliya u dhaliyay kooxda West Ham United.
Kooxda West Ham United ayaa kala Horeynta horyaalka ingiriiska ee Premier League-ga uga jirto kaalinta sideedaad,waxana ay leedahay 39-dhibcood,halka kooxda Crystal Palace ay horyaalka uga jirto kaalinta 12-aad,iyadoo leh 30-dhibcood.
Tiro koob horu dhac ah oo laga sameeyay goobaha ganacsiga ee Muqdisho “SAWIRRO”
Kooxaha Manchester United,Swansea,West Brom,Stoke iyo Newcastle oo Guulo Gaaray “SAWIRRO”